रघुजी पन्तलाई कोमल वलीको प्रश्नः सबै महिला नेतृ पिंडुला देखाएर पदमा पुगेका हुन् ? - Ujyaalo Nepal
रघुजी पन्तलाई कोमल वलीको प्रश्नः सबै महिला नेतृ पिंडुला देखाएर पदमा पुगेका हुन् ?
By ujyaalo	 Last updated Feb 28, 2021 36
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल वलीले नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता रघुजी पन्तले आफूमाथि गरेको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । सामाकिज संजालमार्फत ओलीले पन्त निच भएको खुलेको आरोप लगाएकी छन् ।
उनले लेखेकी छिन्, ‘हामीले नेता मानेका रघुजी पन्त कति निच हुनुहुँदोरहेछ भन्ने बल्ल खुलेकोछ । पन्तजीलाई मेरो प्रश्न,तपाईँको पार्टीमा कुनै पदमा रहनुभएका महिला नेतृहरुले को कसलाई पिंडुला देखाएर त्यो स्थानमा पुग्नुभएको हो ? केयो देशमा महिला कुनै पदमा पुग्न तपाईको जस्तो दरिद्रसोचको शिकार हुनुपर्छ।’
उनले उनले एकअर्काको सम्मान गर्न नसिक्ने नेतृत्वले समाजलाई दुर्घटनातिर लैजाने बताएकी छन्। उनले लेखेकी छन्, ‘पूर्वीय दर्शन देखि मानव विकासमा महिलाको उच्च सम्मान समाजको कसिमा उत्तीर्ण भएर भएको छ । प्रकृतिले नै महिला र पुरुषको समायोजन गरेको हो । एकअर्काको आदर सम्मान विना समाजमा न्याय समानता र विवेकशीलताको अन्त हुन्छ । समाज हिंसा तिर जान्छ र दया करुणा जस्ता कुरा हराउँछन् । तसर्थ एकले अर्कालाइ सम्मान गर्नु जीवनलाई मर्यादित र सरल बनाउनु हो । तर नेकपाका नेता रघु पन्तले महिलाहरुले प्राप्त गर्ने पदहरु पिंडुला देखाएर भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ उहाँको मानव विकासका क्रममा बन्ने तन्तुहरु बीचैमा रोकिएको जस्तो छ । उहाँले प्रयोग गर्ने शव्दहरुले आफ्नो आमा दिदीबहिनी सबैलाई अपमान गरेको छ । विवेक हिन मानिसको आलोचना ले आफैलाई आलोचित गर्दछ यस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गरेका राजनीतिक पार्टी र समाजको दुर्घटना कति टाढा होला ?’
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पन्तले नेकपामा कैयौं वर्ष संघर्ष र बलिदान दिएका महिलाहरु हुँदा पनि तिनले कुनै पद नपाएको तर कोमल वलीले भने तुरुन्तै पद पाएको बताएका थिए । पन्तले २० औं वर्ष बिहा नै नगरेर यो पार्टीमा बसेका महिलाहरुले पद नपाएका तर वलीले भने सारी सरक्क सर्काएर पिडुंला देखाएको भरमा सांसद पाएको बताएका थिए ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०४:५९